» “हिजो छक्का भन्नेलाई छक्क पारेर काम गर्नु छ”
प्रधानमन्त्री ओली गोरखा ब्रिगेडको मुख्यालय पुगे, गोरखा सैनिकहरुबाट गार्ड अफ अनर प्रदान-पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका सहसचिव नन्दु गेलाङको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु-विश्व रत्तदाता दिवसको अवसरमा बुटवलमा अन्तरक्रिया-निष्ठाको राजनीतिमा शैलजाको भूमिका अनुकरणीय:काग्रेस नेताहरु-नवलपरासीमा चट्याङ लागेर एक बृद्धाको मृत्यु-त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिबिए कार्यक्रम अब बुटवलको वाणिज्य क्याम्पसमा-तिलोत्तमामा हुने अन्तर मावि फुटसलको तयारी पुरा-विश्वकपमा आज अस्ट्रेलियाविरुद्व पाकिस्तान भिडदै-नेपालमै पहिलो पटक पशुपंक्षीको उद्धारका लागि चितवनमा वन्यजन्तु एम्बुलेन्स ल्याइयो-प्रधानमन्त्री ओली बेलायतका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर आज फ्रान्स जाँदै
“हिजो छक्का भन्नेलाई छक्क पारेर काम गर्नु छ”
२४ जेठ, रुपन्देही । रुपन्देहीको देबदहमा जन्मिएका ३२ वर्षिय रेशम न्यौपानेलाई तेस्रो लिङ्गी भएको थाहा पाएपछि सानै उमेरमा परिवारले घरबाट निकालिदिए ।
उनले आफुलाइ त्यसो नगर्न विन्ति गरे तर बुवा आमाले मानेनन् । आफुमाथि कुटपिट हुन थालेपछि उनी घर छाड्न बाध्य भए । परिवारको माया नपाएपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन पनि सकेनन ।
तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण समाजले उनको अस्तित्व स्विकार गरेन । कैयौपटक आत्महत्याको असफल प्रयास गरे । जिविका चलाउन बुटवलका गल्लीहरु धेरै चाहारे तर भनेजस्ते काम नपाएपछि रेशम काठमाण्डौ गए । “केटाको शरिरमा केटीको भावना बोकेर हिड्न मेरा लागि युद्ध जित्नु बराबर थियो मैले त्यो शब्दमा बयान गर्न सक्दिन तर मलाई परिवार र समाजले कहिल्यै बुझेन” उनले दुखेसो पोखे । उनलाई तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण काठमाण्डौमा पनि सबैले छिःछि र दुरदुर गरे । केही सिप नलागेपछि उनले ठमेलमा देह व्यापार शुरु गरे ।
मनोरञ्जनको दुनियाँमा रेश्मा डार्लीङ्गको नामबाट उनले चर्चा बटुले । “मलाई राती ढिलो हुदा पीर गर्ने कोही थिएन, नत कस्तो छ भनेर सोध्ने कोहि थियो, जन्मदिने बुवा आमालाई त वास्ता भएन अरुले के भन्लान भनेर कहिल्यै सोेचिन” रेशमले भने । नृत्यमा विशेष दख्खल राख्ने रेशमले विस्तारै देहव्यापार छोडेर नृत्य निर्देशकको रुपमा काम शुरु गरे । उनि नेपालको पहिलो तेस्रो लिङ्गी नृत्य निर्देशक हुन । उनी अहिले आफनो पेशा र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । “हिजो छक्का भन्नेलाई छक्क पारेर काम गर्नु छ” रेशम भन्छन् ।
पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएकी ३० वर्षीया अवान्तिका घर्ती मगरले तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण शारिरिक, मानसिक र सामाजिक हिंसा सहिन । तेस्रो लिङ्गि भएकै कारण सानै उमेरमा परिवारले घरबाट निकालिदिएपछि विचल्लिमा परेकी उनको भोगाइ दर्दनाक छ । “विद्यालय उमेरबाटै विभिन्न उपनामले गिज्याए , मानसिकरुपमा विक्षिप्त भएका बेला तानसेनमा म जस्तै अरु साथी भेटें” उनि भन्छिन् । अहिले ब्लु डाइमण्ड सोसाइटिमा आवद्ध भएर उनले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउदै आएकी छन् ।
अर्घाखाँचीका १७ वर्षीय शिशिर भट्टराईको भोगाइ पनि सुखद छैन । बिद्यालयमा पढ्दा पढ्दै अन्तरलिङ्गि भएको थाहा पाएपछि बुवा आमाले अनेक यातना दिए । “विद्यालयमा साथिभाइसंग बस्न समेत दिइएन नत विरामी हुदा उपचार पाएं, एउटै कोखबाट जन्मिएपनि भाइ बहिनी र ममा ठुलो विभेद गरियो” – शिशिर आँशु झार्दै दुःख पोख्छन् । अन्ततः बुवा आमाले कुटपिट गरी घरबाट निकालिदिएपछि उनि अहिले बुटवलमा छन् । अन्तरलिङ्गि भएर जन्मिएर मैले के अपराध गरें ? जसका कारण मलाइ परिवार र समाजले स्वीकार गरेन –शिशिर प्रश्न गर्छन ।
रेशम, अवान्तिका र शिशिर मात्र होइन अधिकांश यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको पिडा एउटै छ, परिवार र समाजले स्वीकार नगर्नु । “हाम्रो पहिचान स्वीकार गरिएको छैन, अझैपनि विभिन्न उपनाम दिएर जिस्काउँछन्” – निल हिरा समाजका अध्यक्ष आनिक राना भन्छिन् ।
सरकारी निकाय, संघ संस्था, अस्पताल तथा सार्वजनिक यातायात जहाँ जादा पनि महिला, पुरुष मात्रै उल्लेख हुन्छ तर हामी कहाँ जाने ? उनको प्रश्न छ ।
रानाका अनुसार रुपन्देही जिल्लामा करिब ९ हजार यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरु छन् । तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण परिवार र समाजले हेला गर्नेमात्र होइन सम्पत्तिबाट समेत बेदखल हुनुपरेको उनिहरुको गुनासो छ ।
हुन त देशको संबिधानमा हरेक व्यक्तिले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने अधिकार उल्लेख छ तर व्यवहारिक कार्यान्वयन छैन । “मानिसको पहिलो पाठशाला परिवार हो, जहाँबाट सिकाई शुरु हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पारिवारिक मायाबाट बञ्चित भएपछि व्यक्ति सडकमा आउन बाध्य हुन्छ, त्यसैले परिवारबाटै उपयुक्त वातावरण तयार हुनुपर्छ ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका ५ नं प्रदेश कार्यालय निर्देशक सम्झना शर्मा भन्छिन् ।
नवलपरासीमा चट्याङ लागेर एक बृद्धाको मृत्यु
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिबिए कार्यक्रम अब बुटवलको वाणिज्य क्याम्पसमा
तिलोत्तमामा हुने अन्तर मावि फुटसलको तयारी पुरा
विश्वकपमा आज अस्ट्रेलियाविरुद्व पाकिस्तान भिडदै
नेपालमै पहिलो पटक पशुपंक्षीको उद्धारका लागि चितवनमा वन्यजन्तु एम्बुलेन्स ल्याइयो
प्रधानमन्त्री ओली बेलायतका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर आज फ्रान्स जाँदै